China Wholesale Zipper accessories Vatengesi, Vagadziri - GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.
Kumba > Zipper zvishongedzo
Pakati mutsara weVislon zipper
Iyi yerabha zino repakati mutsetse wakagadzirwa ne polyester yarn. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvakapfuura SGS uye zvakapfuura kuongororwa uye ndokuisa pamusika. Iko manejimendi manejimendi ezvigadzir......
Nylon zipper yepakati mutsetse
Iyi nylon yepakati mutsara inogadzirwa neye polyester yarn. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei ayo mavheti. Zvese zvigadzirwa zvave SGS yakaedzwa uye ikaiswa pamusika mushure mekupasa bvunzo. Iyo yakakwana chigadzirwa mhando manejimen......
Center mutsetse wesimbi zipi
Iyi simbi yepakati mutsetse yakagadzirwa ne polyester yarn. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvakapasa bvunzo yeSGS uye ndokuisa mumusika mushure mekupasa bvunzo. Iyo yakakwana chigadzirwa mhando manejimen......
Iyi nylon monofilament inogadzirwa nePET. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvave SGS yakaedzwa uye yakaiswa mumusika mushure mekupasa bvunzo. Iyo yakakwana chigadzirwa mhando manejimendi system yakaunzwa. ......
Simbi block bhaudhi
Iyi simbi block bolt inogadzirwa ne zinc alloy. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvave SGS yakaedzwa uye ikaiswa pamusika mushure mekupasa bvunzo. Iyo yakakwana chigadzirwa mhando manejimendi system yakaun......
Nylon block bhaudhi
Iyi nylon block bolt inogadzirwa ne zinc alloy. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvakapasa bvunzo yeSGS uye ndokuisa mumusika mushure mekupasa bvunzo. Iyo yakakwana chigadzirwa mhando manejimendi system ya......